Zvese nezve kuvaka muchina uye DIY - Ikkaro
kudzidziswa >> Mashini
Tichaenda kudzidza nezve michina. Maitiro ekuzvivaka, kuzvigadzirisa, mashandiro azvo, izvo zvakagadzirwa.
Isu tinosiyanisa pakati pemachina uye michina, nekuti isu tinotenda kuti michina inokodzera chikamu chavo, nekuti vane zvakakwana nzvimbo kuzviita.
Nemichina isu tinongedzera kune seti yezvinhu, zvikamu uye mashandiro ane chakanangana chinangwa kana chinangwa (shandura kana gadzira simba, ita basa, nezvimwewo)
Nzira yekugadzira hypsometer kana kona uye kure mita
Zvakanaka kumudana hypsometer, asi ini handisi kunyatso kujekesa kuti iyi hypsometer, asi chishandiso chekuyera makona kana kukwirira.
Zvinoenderana neRAE a hypsometer Ndicho zvishandiso zvekuyera kureba pamusoro pegungwa zvichibva panzvimbo yekubikira yemvura.
Saka tichakufonera kona, chinhambwe uye kukwirira mita kumirira muverengi kuti atisiire mhinduro ine zita rechishandiso ichi.
Maitiro ekugadzira muchina weswiti switi
Imi mese makadya zvihwitsi zvekotoni pamutambo, asi mungada here kuti mukwanise kuzvigadzira pachenyu? Cesar Garci Trujillo, ... Ramba uchiverenga
Gadzira magineti inosimudzira
Kune vakawanda kuedza, pane ese ane chekuita nemakemikari zvigadzirwa, a rinokurudzira remagineti.
Saka pano tinokuunzira maitiro ekugadzira inogadzira yemagineti inomutsa
Sezvauri kuona, isu tinoshandisa fan kubva kuPC sosi kune iyo neodymium magineti kubva kune rakaomarara dhisiki.
Maitiro ekugadzira yakagadzirirwa kumba kweTrbuchet catapult
Chokwadi unoda catapults, munhu wese anovada :) Uye kana tichigona kuvaita vakuru, zvirinani pane zvirinani.
Izvi zvaunoona mumufananidzo i trebuchet catapult. Kune mazana e nzira dzekuita ichi catapult. Kubva pamatanho makuru, seyekare medieval castle yekurova chombo kune zvidiki uye zvakakurisa kugadzirwa mamodheru
Maitiro ekugadzira Tesla coil
Kunyangwe isiri nhanho nhanho, vhidhiyo inotevera inotiratidza zvikamu uye maitiro ekugadzira imwe ... Ramba uchiverenga
Nzira yekugadzira volumetric pombi yemvura
Kutsvaga ruzivo pa hydraulic mabhomba, Ndawana vhidhiyo yeiyi inonakidza volumetric pombi yakaitwa naAlvaro Morante uye vadzidzi ve UPV (Polytechnic Yunivhesiti yeValencia)
Kunyangwe ndanga ndisina mukana, ndinorangarira izvo mumusoro we Hydraulic michina, makwikwi ekuvakwa kwemapombi e hydraulic akatanga, kuona kuti ndeipi inogona kuendesa imwe mvura mu1 miniti. Ini handizive kana bhomba revhidhiyo iri raive remakwikwi aya eiyo fakaroti ye Industrialesasi zvakaita kuti ndirangarire
Nzira yekugadzira imba yekuita compressor ine firiji mota
Kubva kuMancera vanotisiira dzidziso yekuti ungagadzira sei compressor yekumba ine injini inotyisa. Iyo dzidziso inouya ... Ramba uchiverenga
Imba Magetsi Go Kart
Mushure mekuona iyi vhidhiyo, ndine chokwadi chekuti uchave uchitarisira mberi gadzira yako wega kart yemagetsi. Iyo iri muvhidhiyo ndeye mota yekugadzira yemagetsi, imba yakagadzirwa sekudaidza kunoita maAmerican
Neurotikart imba yemagetsi kart kuratidzira
Uye kana usiri kujekesa, tarisa kuti shanduko yeiyi inoshanda sei kart kugutsikana zvizere zvekuda kuita imwe. 6 bhatiri pane 4 uye iyo inosvika 85 km / h
Takopa zvinyorwa pazasi zvinotsanangura iyo Wimshurst Muchina, nekuti kune zvimwe zvinhu zvekuti kana uchigadzirisa ivo vanogona kuenda chete asi ;-) Kwazvinobva: Homer's Peji, webhusaiti yandinokurudzira kune vese ...
Invented ne James Wimshurst, yakatanga kutsanangurwa muna 1883 uye ikashandiswa, pakati pemamwe mafomu, se yakakwira-voltage sosi yekutanga X-ray machubhu, Chiri electrostatic muchina, Inoumbwa nemadhisiki maviri einodzivirira zvinhu, akafanana, ari padhuze nepadhuze uye akarongedzwa pane imwechete axis, nenzira yekuti vanogona kutenderera nekukurumidza nenzira yakatarisana.
Kutenderera kwayo kunoitwa nerubatsiro rwechibato chinoshanda pamapara maviri emapuru akabatanidzwa netambo isingaperi, mumwe wavo akayambuka. Chiso chekunze chedhisiki yega yega chine zvikamu zvakawandisa zvesimbi zvakanamirwa padivi payo, izvo panguva yekutenderera zvinokwizwa netumabhurashi tusimbi tusingaenzaniswi, tunobatwa kumagumo kweuta hwesimbi.